Oyster Peptides သည်အမျိုးသားများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သလား။
၂။ Oyster Peptide ဆိုတာဘာလဲ။
၃။ Oyster Peptide ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
၅။ Oyster peptide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ ကမာ peptide သောက်သုံးသော?
၆။ Oyster Peptide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလား။
7. ကမာ Peptide အမှုန့်လျှောက်လွှာ?
ကမာကော့စတာအမှုန့်များ၏ရေပန်းစားသောပင်လယ်သတ္တဝါသည်လူအများစုအတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနူးညံ့သောအရာဖြစ်သည်။ သငျသညျကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုမဆိုသင်ရွေးချယ်ပါကကမာအသားသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဟာရဓာတ်များစွာထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ အာဟာရများတွင်ပရိုတိန်း၊ ကျန်းမာသောအဆီများ၊ ဓာတ်သတ္တုများနှင့်ဗီတာမင်များပါဝင်သည်။
ကမာအသားမှထုတ်ယူနိုင်သောထုတ်ကုန်များစွာရှိပြီးကမာ peptide သည်၎င်းထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကိန်းဂဏန်းအကျိုးကျေးဇူးများအကြားကမာဇီဝသက်ရှိ peptides များနှင့်အမျိုးသားများ၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
Oyster Peptide ဆိုတာဘာလဲ
ကမာ peptide အမျိုးမျိုးသောဇီဝနည်းပညာမှတဆင့်ကရင်အသားပရိုတင်းမှရရှိသောသဘာဝဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း peptide သည်သွပ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ taurine အပြင်ဗီတာမင် A၊ B1, B2, B5, C, D နှင့် E. ကြွယ်ဝသောကြောင့်၎င်းကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအစားအစာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူအများအထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြwithနာများရှိသောအမျိုးသားများအကြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။
Oyster bioactive peptides သည်အခြားဘုံမာထွက်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောဇီဝစွမ်းရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကမာ peptide တွင်ပိုမိုအရေးကြီးသောဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။ ပိုကောင်းတာကတော့ဘုံမာထွက်ပစ္စည်းနဲ့မတူတာက \_ t ကမာ peptide အမှုန့် အရသာကောင်းပြီးငါးမွှေးသောအနံ့မရှိပါ။
ကမာ Peptide Functions များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ကမာ peptide တွင်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
ကမာ peptide မှရရှိသော taurine သည်လူတစ် ဦး ၌ရှိသောသည်းခြေများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့အပြင်ကမာအနကျအဓိပ်ပါယျမှနျကနျသောအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အသည်းအတွင်းရှိစုဆောင်းထားသောအဆီများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးသည်၎င်း၏ detoxification အလုပ်တွင်အသည်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ကမာ peptide သည်အာဂျင်တီးနားနှင့်လူ၏လိင်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂျက်စတာ၊ testosterone နှင့် estrogen စသည့်လိင်ဆိုင်ရာဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
Oyster peptide အမှုန့်ကိုပုံမှန်သောက်တဲ့အခါ၊ သင်ဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုလှပလာမည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင့်အရေပြားရဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ဝစေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဓါတ်ကိုပြန်လည်ရရှိစေလို့ပါ။
ဒါ့အပြင်ဒီသဘာဝအမှုန့်သည်အရေပြား Melanin ပြိုကွဲခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင့်အသားအရေသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ပို၍ ပင်ဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် peptide တွင်ပါရှိသော iodine နှင့် tryptophan သည်သင်၏ဆံပင်ကိုအမည်းရောင်ဖြစ်စေပြီးပိုမိုလှပစေပါသည်။
သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ကျန်းမာရေးသည်သင်၏သုခချမ်းသာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးသောကူးစက်ရောဂါများနှင့်ရောဂါများမှကာကွယ်ပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သွပ်သည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားကောင်း။ ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအဓိကအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်ကမာ peptide သည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှန်ကန်သောသွပ်ပမာဏနှင့်အတူကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကအန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအားအန္တရာယ်ကျရောက်စေရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင် peptide thymus gland အားဖြင့် thymulin ထုတ်လုပ်မှုလှုံ့ဆော်။ thymulin ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်းက T-cell နှင့် T4 Helper ဆဲလ်စည်းမျဉ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်အားကောင်းစေသည်။
သင်ရှောင်ရှားနိုင်သည့်အချို့သောရောဂါများနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ကမာ peptide ပါဝင်:
အခမဲ့ - အစွန်းရောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်ပေးသည်
peptides အပါအ ၀ င် Oyster ထုတ်ယူမှုမှာခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များနှင့်တစ်ရှူးများကိုအသက် - အရှိန်တိုးမြှင့်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသော antioxidants များပါရှိသည် oxidative စိတ်ဖိစီးမှု.
Oyster peptide တွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အသည်းလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်အပြင် Lactic acid စုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အက်ဆစ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားပိုမိုခွန်အားရရှိစေရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေသို့မဟုတ်နာမကျန်းမှုဖြစ်ပြီးနောက် ပို၍ ရှင်းလင်း၍ လတ်ဆတ်သောစိတ်ရှိရန်ကူညီသည်။
ကမာ peptide လူတို့အဘို့အအကျိုးကျေးဇူးများ
လိင်မှုကိစ္စပြwithနာများရှိသောအမျိုးသားများသည်ကမာ peptide မှများစွာအကျိုးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ခွန်အားမရှိခြင်း၊ ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါ hypoplasia နှင့်အတူအမျိုးသားများပါဝင်သည်။ ကမာ peptide ကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ကမာ peptide ၏ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်၏နောက်ကွယ်တွင်ပါ ၀ င်မှုမှာမာကြောခြင်းသည်သွပ်၏အချမ်းသာဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ကမာရှိသွပ်ပါဝင်မှုသည်အသားနီများထက်ဆယ်ဆပိုမိုမြင့်မားသည်။
သိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံနည်းကျအရသွပ်တစ်မျိုးသည်လူတစ် ဦး ၌အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမြင့်တက်စေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သွပ်ချို့တဲ့ခြင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာယောက်ျားတွေမှာဒုတိယဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းထားဖို့ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ဖို့သွပ်လုံလောက်မှုမရှိလို့ပဲ။ များသောအားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ကျသောအမျိုးသားများသည်လိင်စိတ်နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းနည်းသည်။
Oyster extract တွင်သွပ်အပြင်ဗီတာမင် D ပါ ၀ င်သည်။ အခြားအာဟာရတစ်ခုသည်လူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် testosterone ဟော်မုန်းပိုမိုထွက်ရှိစေသည်။ ကြွက်သားသန်စွမ်းမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုတိုးတက်စေသည်။
ထို့အပြင်ကမာ peptide သည်အာဂျင်ဓာတ်၊ သဲလွန်စဒြပ်စင်များနှင့်ဆယ်လီနီယမ်များစွာတို့ပါဝင်ပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးသည်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဤကမာထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသောလူသည်မျိုးပွားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
လူတစ်ယောက်ယူတဲ့အခါမှာ ကမာ peptideသူ၏ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များလာခြင်းဖြင့်သူ၏လိင်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ခန်ဓာကိုယ်၏ခွန်အားနှင့် testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်မှုတို့ကြောင့်အမျိုးသားသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိင်စိတ်ပိုမိုကူးစက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းအပြင်အထီးအခြေအနေများဖြစ်သည့်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ hypoplasia တို့အတွက်ထိရောက်သောဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျားမပါ ၀ င်မှု၊ အထူးသဖြင့်ကမာ peptide ကိုအမျိုးသားများအကြားအမျိုးသားကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်ရာနှင့်ချီ။ အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။
ကမာ peptide ဆေးတစ်ကြိမ်သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးမှအကျိုးခံစားရရန်အတွက်ယောက်ျားသည်နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်စာမလိုအပ်ပါ။ ဖြည့်စွက်စာကိုသောက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီခန့်အကြာတွင်အမျိုးသားတစ် ဦး သည် ပို၍ အားတက်လာပြီးလိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်အားထက်သန်လာသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ကမာ peptide အကျိုးကျေးဇူးများ
ကမာ peptide ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအလုံးစုံ၏ခွန်အားတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, antepartum သို့မဟုတ် postpartum အားနည်းချက်ကြုံနေရအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဤဖြည့်စွက်ယူသောအခါ, သူမပိုမိုအားကောင်းခံစားရသည်။
ထို့အပြင်၊ အမျိုးသားများကဲ့သို့ပင်အမျိုးသမီးများသည်ကမာ peptide ကိုသောက်ပြီးနောက်လိင်ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခန္ဓာကိုယ်သည် testosterone ဟော်မုန်းကိုထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်သားဥအိမ်များတွင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးများသည်ဟော်မုန်းပမာဏလျော့နည်းသွားသဖြင့်ရလဒ်အနေဖြင့် libido နှင့်ယောနိခြောက်သွေ့မှုနည်းသည်။
ကံအားလျော်စွာ၊ ကမာ peptide မှသွပ်များထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်းသည်သွေးဆုံးအမျိုးသမီး၏ testosterone ဟော်မုန်းကိုတိုးစေသည်။ ၎င်းရလဒ်သည်လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော 'ချောဆီအရည်ပျော်' သည့်ယောနိဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်နိုင်သည်။
အခြားလိင်ဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Oyster Peptide အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
အများဆုံးနှင့်မတူပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ၊ ကမာ peptide သည်သဘာဝအားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ ထို့အပြင်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့၎င်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသောက်ရန်မလိုပါ။ ကမာ peptide ဆေးတစ်ခုတည်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုက ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ကမာ Peptide ထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်
ကမာ peptide ကိုကမာအသားမှထုတ်ယူရန်အဆင့်များ။
ကမာအသားကိုကယ်လ်ဆီယမ်ဆား၊ ဤသည်ကမာအသား slurry ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီအဆင့်ဟာကမာမှာရှိတဲ့ endogenous enzymes တွေကိုသက်ဝင်စေဖို့နဲ့ပြန်လွှတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်လာမည့် enzymatic hydrolysis တွင်ပါဝင်သောအင်ဇိုင်းဓာတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုလျော့ချသည်။
အဆင့် ၂: အင်ဇိုင်းဓာတ်ငွေ့ hydrolysis
အဆင့် (၁) မှထုတ်လုပ်သောကမာအသား slurry ကိုအင်ဇိုင်းဓါတ် Hydrolysis ပြုလုပ်သည်။ တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီခန့်အကြာတွင်အပူကို ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနှိုးဆော်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ထို့နောက်ကြားခံပရိုတိန်းအင်ဇိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အယ်ကာလိုင်းပရိုတင်းစ် (Pvr) ပင်ကိုပေါင်းစပ်ရန်ထည့်သည်။ လာမည့်ငါးနာရီမှရှစ်နာရီအတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်ရန်အတွက်အပူချိန်သည် ၅၀ မှ ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိညှိသည်။
ထို့နောက် pH ကို ၅.၀.၅ မှ ၅.၅ သို့ချိန်ညှိသည်၊ အရသာပရိုတင်းဓာတ်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်အင်ဇိုင်းနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ hydrolysis ကိုနောက်ထပ်နှစ်နာရီမှသုံးနာရီအထိဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့နောက်ရရှိလာတဲ့ supernatant တစ် ဦး ရေနံစိမ်းအရည်ရဖို့ centrifuged ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၃: Decolorizing နှင့်သန့်စင်ခြင်း
အဆင့် ၂ တွင်ရရှိသောကမာကူရစ်သတ္တုကို activated ကာဗွန်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီအရောအနှောကို ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ၃၀ မှမိနစ် ၆၀ အထိအပူချိန်မှာနှိုးဆော်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကို decolorized နှင့် ceramic membrane ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ ရရှိလာတဲ့ filtrate ဆိုတာကကမာ peptide ကိုသန့်စင်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။
အဆင့် 4: အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှုန်ရေမွှား - ခြောက်သွေ့
အဆိုပါကမာ peptide ဖြေရှင်းချက်လေဟာနယ်ဖျော်ဖြေပွဲမှတဆင့်အနည်းဆုံး 35% အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာမှအာရုံစိုက်သည်။ ထို့နောက်အစိုင်အခဲကမာ peptide ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောအရသာရှိပြီးဆိုးရွားလှသောအနံ့ဆိုးမရှိပါ။
Oyster peptide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုယူရမလဲ။ ကမာ peptide သောက်သုံးသော?
သင်၌ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် ကမာ peptide အမှုန့်။ ပထမတစ်ခုမှာသင့်တော်သောရေရှိသည့်ပုလင်းထဲတွင်လှုပ်ခါခြင်းနှင့်ရောစပ်ခြင်းကိုသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကခြောက်သွေ့အောင်ယူပြီးသင်၏အစာအိမ်ထဲသို့ရေနစ်စေရန်ရေအနည်းငယ်ကိုသောက်နိုင်သည်။
ကမာ bioactive peptides များအတွက်တိကျသောသောက်သုံးသောမရှိပါ။ သို့သော်အချို့သမားတော်များမှအကြံပြုသောပျမ်းမျှပမာဏမှာ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်အထိသောက်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤသည်သည်သဘာဝနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ချရသောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်သောက်ချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကမာ Peptide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
ကမာ peptide သို့မဟုတ်ကမာ peptide ထုတ်ယူမှု၏သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။ အဓိကအားဖြင့်ထုတ်ကုန်သည်သဘာဝကျပြီးအန္တရာယ်ရှိသောအတုထည့်သွင်းပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ပင်လယ်စာဓါတ်မတည့်သူများသည်ကမာထုတ်ယူသုံးစွဲပြီးနောက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လယ်စာဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသူတစ် ဦး သည် peptide အပါအ ၀ င်ကမာပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
ကမာ Peptide အမှုန့်လျှောက်လွှာ
၎င်း၏ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမာ peptide အမှုန့်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကမာကောင်များသည်လူသားတစ် ဦး ၏သွေးရည်ကြည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအတည်ပြုထားသောအချက်အလက်များကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသောအမျိုးသားများသည်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုကြသည်။
ထို့အပြင်သဘာဝအမှုန့်ကိုသွေး lipids ၏စည်းမျဉ်းများနှင့် platelet စုစည်းမှု၏တားစီးဘို့အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတိုးတက်စေသောကြောင့် hyperglycemia လက္ခဏာများ၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းသူများအတွက်လည်းအကြံပြုသည်။
ကင်ဆာရောဂါရှိသူများသည်ရောဂါကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အမှုန့်များစားနိုင်သည်။ ကမာထုတ်ကုန်သည်ကင်ဆာဆဲလ်များပျံ့နှံ့ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အမှုန့်ကိုလည်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောနှင့်နှလုံး systolic အင်အားအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကမာ peptide အမှုန့်၏အခြား applications များပါဝင်သည်:
ပibိဇီဝဆေး function ကို
ကျယ်ဝန်း foreskin ဂလင်းများအတွက်ဆေးတစ်လက်အဖြစ်
ထို့အပြင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည် ကမာ peptide အမှုန့် အစားအစာအပြင်အဖြစ်။ အရသာကောင်းမွန်ပြီးပင်လယ်ငါးထုတ်ကုန်များအဖြစ်ငါးကြီးမွှေးသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ ထို့အပြင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ကျန်းမာရန်လိုအပ်သောအာဟာရများပေါများသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်၏သာမန်အစားအစာများအတွက်ကောင်းသောဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ကမာ peptides, ကမာ၏ extracts အလွန်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အလွန်လုံခြုံဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြသည်။ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအမျိုးသားများ၏လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ဤ peptides များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိမ့်အမြင့်ရှိသူနှင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းပြmenနာရှိအမျိုးသားများအတွက်သုက်ပိုးအရေအတွက်များပြားစေသောအမျိုးသားတစ် ဦး ၌ libido တိုးပွားစေနိုင်သည်။ လိင်နိမ့်ပါးခြင်းနှင့်မိန်းမအင်္ဂါခန်းခြောက်ခြင်းများကိုခံစားနေရသောသွေးဆုံးအမျိုးသမီးများသည်ကမာ peptide ထုတ်ယူမှုမှများစွာအကျိုးရှိနိုင်သည်။
Chen က D. , Liu, Z. , Huang, ဒဗလျူ, Zhao, Y. , Dong, S. , & Zeng, M. (2013) ။ ကမာပရိုတိန်း hydrolyzate ထံမှသွပ် -binding peptide ၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Functional အစားအစာများ၏ဂျာနယ်, 5(2), 689-697 ။
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008) ။ အခမဲ့အစွန်းရောက်သွေးဆောင် DNA ကိုပျက်စီးမှုကိုဆန့်ကျင်ကမာ၏အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအစာကြေ, Crassostrea gigas မှစင်ကြယ်သော antioxidative peptide ၏အကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဇီဝအရင်းအမြစ်နည်းပညာ, 99(9), 3365-3371 ။
Umayaparvathi, အက်စ်, Meenakshi, အက်စ်, Vimalraj, V. , Arumugam, အမ်, Sivagami, G. အ, & Balasubramanian, တီ (2014) ။ Oyster (Saccostrea cucullata) ၏အင်ဇိုင်းများ Hydrolyzate မှ bioactive peptide ၏ antioxidant လုပ်ဆောင်မှုနှင့် anticancer effect ဇီဝဆေးပညာနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအာဟာရ, 4(3), 343-353 ။
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X. , Yongjun, LOU, & Wah, C (2017) ။ US မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအမှတ် 15 / 542,743.
Zeng, အမ်, Cui, ဒဗလျူ, Zhao, Y. , လျူ, Z. , Dong, အက်စ်, & Guo, Y. (2008) ။ ကမာကနေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတက်ကြွ peptide ။ Oceanology နှင့် Limnology ၏တရုတ်ဂျာနယ်, 26(3), 307-312 ။